/Blog/Gallery/Konke mayelana ne-Oxandrolone (Anavar), udinga ukwazi
Posted on 10 / 26 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Yini i-Oxandrolone (I-Anavar)?
I-Oxandrolone (I-53-39-4), ene-Anavar powder njengegama lomkhiqizo wayo, umuthi owenziwe nge-androgen ne-anabolic steroid (AAS) odume kakhulu ngamandla namandla akhe okukhulisa amandla. Iphakathi kwama-anabolic steroid aziwa kakhulu futhi asetshenziswa ngomlomo. I-Anabolic isho ukuthi iqinisa amaprotheni eseli, ngaleyo ndlela iholele ekunyuseni ngokushesha kwemisipha namathambo aqinile.
Ukuba yi-analogue ye-testosterone (ukwakheka kwayo kuyafana ne-testosterone), u-Anavar usebenze ama-receptors athile enuzi futhi ubopha kuwo njengoba kwenza i-testosterone. Ngenxa yalokho, kungaba wusizo ekwelashweni kwe-testosterone.
I-Oxandrolone (Anavar) i-powder (53-39-4) iphephile ukuthi isetshenziswe yibo bobabili abesilisa nabesifazane lapho umthamo ofanele unamathele. Okungcono futhi, imiphumela yayo emibi kungenzeka imnene. Ngakho-ke, kungenye yezixazululo zabantu abaphethwe yi-HIV -tingting syndrome noma i-hypogonadism yowesilisa njengoba kuthuthukisa ukugcinwa kwe-nitrogen kanye nokuqina kwemisipha engenamafutha.
Uma ufuna i-anabolic steroid emnene kepha esheshayo indoda nendoda, cishe akunakuhamba kabi nge-Oxandrolone powder (53-39-4). Abanye abantu, ngisho nokubuyekezwa kokubalwa kabusha kwe-Anavar, bakubize ngokuthi “The Girl Steroid” ngoba kuphakathi kwama-steroid ambalwa ahamba kahle iningi labesifazane.
I-Oxandrolone (Anavar) wachazwa okokuqala ngonyaka we-1964 eSearle Laboratories (okwamanje okuyi-subsidenti kaPfizer). Le nkampani futhi ikhiqiza nezinye izidakamizwa ezivelele njengeCelebrex, NutraSweet ne-Ambien. Kuyindlela yokusungulwa kwemizamo yokubambisana kaRaphael Pappo noChristopher J. Jung.
Ochwepheshe bokucwaninga bahlatshwa umxhwele imiphumela ebuthakathaka kakhulu ye-androgenic ye-Oxandrolone maqondana nemiphumela yezidakamizwa ze-anabolic. Kamuva, e1964, bethula isidakamizwa njenge umuthi wemithi wokwenyusa ukubuyiswa kwemisipha kubantu abanokwehla kwesisindo okungahleliwe kanye nokwelashwa kwe-HIV / AIDS.
Ngeshwa, lesi sidakamizwa sahlukunyezwa ngezinga elikhulu ngabakhi bomzimba, futhi lokhu kwazisa umphakathi ongemuhle. Njengomphumela, abakwa-Searle Laboratories bayilahla kwi-1989.
Ngemuva kweminyaka eminingana, iBio-Technology General Corporation (Bio-Technology General Corporation) yathatha ucwaningo nentuthuko yalo muthi. Ukuhlolwa kwezokwelapha okwenziwe yinkampani kulo muthi ku-1995 kuholela ekukhishweni kwesibili, kepha bese kungaphansi kwe-Oxandrin (igama lomkhiqizo).
Ngaleso sikhathi, umuthi we-anabolic steroid wawuthengiswa ngaphansi kwamagama ohlobo lomkhiqizo, kufaka phakathi uGenesise I-Oxandrolone kanye ne-Oxandrin, emhlabeni wonke. Kodwa-ke, kamuva yahlanganiswa negama layo lomkhiqizo wase Melika, u-Anavar.
Ngokuhamba kwesikhathi, iFood and Drug Administration (FDA) igunyaze i-Oxandrolone ngesimo sezidakamizwa sezintandane njengokwelashwa kwe-Turner Syndrome, ukwehliswa kwesisindo okufakwa yi-HIV kanye nokunciphisa isisindo ngenxa ye-HIV.
Ukusetshenziswa kwe-Oxandrolone kokubili emakethe nasemakethe engaphansi komhlaba
I-Oxandrolone iyabiza kakhulu ukuyikhiqiza futhi kunemithetho eqinile mayelana nokwenziwa kwayo, ukuthengisa nokusebenzisa kwayo. Ukugwema lezi zingqinamba futhi ugcine ngemali, kube nabathengisi abaningi abenze ibhizinisi lokukhiqiza nokuthengisa lo muthi ngaphansi komhlaba.
Ngeshwa, imakethe emnyama 'i-Oxandrolone' yenziwa emabhalweni angaphansi kwenhlabathi lapho izindinganiso ezidingekayo zingalandelwa kaningi. Ngenxa yalokho, kunzima kakhulu kubasebenzisi ukuthola i-esemthethweni engu-Anavar evela emakethe emnyama noma ilabhorethri engaphansi komhlaba. Ngaphandle kokunganikeli ngemiphumela efiselekayo, lesi sidakamizwa kungaholela emiphumeleni emibi.
Enye inkinga nge-Anavar ethengiswa emakethe engaphansi komhlaba ukuthi ingahlukunyezwa ngisho nabancane ngoba ayikho imithetho evimbela ukutholwa kwabo nokusetshenziswa kwayo.
Uma ufuna ukuthola i-Anavar eyiqiniso futhi ephephile, qiniseka ukuthi wenza okwakho Thenga i-Oxandrolone powder kumthengisi onelayisense futhi olawulwa ngokusemthethweni. Yize i-Oxandrolone ithenga kubathengisi abanjalo kungenzeka ukuthi ihlakaniphe njengoba kuqhathaniswa nabamakethe emnyama, bayakufanele.
Uqinisekisiwe ukuthi uthola i-powder eluhlaza yangempela noma umkhiqizo wokugcina ngoba iningi labathengisi ngeke lifake engcupheni yokulahlekelwa yilayisense labo ngokuthengisa umkhiqizo ongaqiniseki. I-AASraw uphakathi kwabathengisi abahle kakhulu be-Oxandrolone yangempela.
Intengo ye-oxandrolone imvamisa iphakeme. Ngakho-ke, uma uthola umthengisi ethengisa umuthi ngentengo 'enkulu ehlisiwe', funa ukuthola ukuthi umthengisi unamalayisense futhi usebenza ngokusemthethweni ukuqinisekisa ukuthi awupheli ngomkhiqizo we-contraband.
I-Anavar / Oxandrolone iyinto ebizayo yokwakha, futhi ngokuvamile ayiluleki ukuyithenga kunoma yimuphi umthengisi oyinikezayo ngamanani 'aphansi ajulile'. Ungahlola Ukubuyekezwa kwe-Anavar ukuthola ukuthi umthengisi usebenza ngaphakathi kohlaka lwezomthetho nokuthi imikhiqizo yabo iyiqiniso yini. Ukubuyekezwa kwe-Anavar futhi kungakunika imibono mayelana nezindawo ezinhle kakhulu zokuthenga umuthi.
Isimo somthetho se-Oxandrolone e-US nakwamanye amazwe
E-US, Umthetho Okulawulwa Ngezijumbane uhlukanisa i-Oxandrolone / Anavar, phakathi kwamanye ama-androgen amaningi ne-anabolic steroid njengento yeSheduli III elawulwa into. Lokho kusho ukuthi umuntu kufanele akwenze ngudokotela onelayisense namakhemisi.
Izinhlawulo ezingokomthetho ezikhokhiswa kumuntu ophethe izidakamizwa ezingekho emthethweni kuhlelo III, kubandakanya I-Anabolic steroids powder ka-Oxandrolone noma i-Anavar yokugcina, kuncike emithethweni ethile efanele ebusa izwe.
Ezimweni eziningi, abenzi bokubi bavalelwa imigoqo futhi bahlawuliswe. Ngokomthetho we-Controlled Substance Act, obunye ubugebengu obuhlobene ne-Oxandrolone buhlanganisa ukutholakala nokukhwabanisa kokutholakala kadokotela nokutholakala nomuthi ngaphandle komyalelo ofanele.
E-UK, i-Oxandrolone ingenye yezinto ezilawulwayo ezihlukaniswe kuLuhlu IV; wonke ama-anabolic steroid angawalesi sigaba.
ECanada, imithetho yezwe ephathelene ne-Oxandrolone yayifana naleyo yase-UK kuze kube yi-1996 lapho kuchitshiyelwa umthetho, ngaphandle kwesheduli IV. Ngenxa yalokho, asikho umhlahlandlela ocacile ngokuqinisekiswa okungokomthetho kwabantu abake bawuthola umuthi, labo abanawo njengamanje nalabo abanesifiso sokuwuthola.
Kodwa-ke, umthetho waseCanada steroid une-caveat ethi umuntu ngaphakathi ezweni akanakuthenga lesi sidakamizwa ngaphandle kokuthi achaze isizathu esenza afune ukusithenga. Ngokuya ngesizathu esinikeziwe, umthengisi angavuma noma enqabe isicelo sokuthenga. Umzamo wokuthenga i-steroid kufanele ulandelwe okungenani izinsuku ezingama-30 ngaphambi kokuba kwenziwe enye.
Ubuntu ku Imithetho yezidakamizwa yaseCanada, ikakhulukazi kuze kufike e-Oxandrolone, ibonakala ivumelana nezimo ngenhloso yokuvumela izikhulu zayo zikwazi ukwenza isahlulelo samahhala ezimweni lapho abakhi bomzimba betholakala besebenzisa le-steroid ngezinjongo zokuzijabulisa. Kodwa-ke, ezimweni eziningi, icala lokuqala elihlobene ne-Anavar lidonsela inhlawulo engeqi i-$ 2000 nesikhathi sokuboshwa esifinyelela ezinyangeni ezingama-18.
Isimo sezinto eziwumbala se-Oxandrolone eChina
Ukwenziwa kwama-steroid anjenge-Oxandrolone kulawulwa kakhulu emazweni amaningi futhi lokhu kunciphisa inani labakhiqizi bawo.
Kodwa-ke, abasebenza ezimakethe abamnyama emazweni ahlukahlukene, kubandakanya ne-US basebenzisa lezo ziphuzo ezingokomthetho zokungenisa izinto ezingavuthiwe ze-Oxandrolone futhi bakhiqize futhi bathengise lesi sidakamizwa ngaphandle kolwazi lwezinhlaka ezilawulayo zikahulumeni ezifanele.
I-China inamashumi abathengisi abagunyaziwe be-powder eluhlaza ye-Oxandrolone. Lokhu kwenza ukuthi umkhiqizo utholakale ezweni ukwedlula abathengi abangathanda ukuwuthenga ukuze ucubungulwe. Ngeshwa, okunye ukungeniswa okunguhlaza kwe-Oxandrolone powder okuvela eChina kuyaphanjaniswa, okuholele ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwe-Oxandrolone ese-contraband emhlabeni jikelele.
Yini ongayilindela nge-Oxandrolone?
Iningi labasebenzisi be-Oxandrolone bathatha i-steroid ukuthola isisindo ngokukhula kwemisipha. Lokhu ikakhulukazi ukwenza ngcono impilo yabantu abahlangabezana nokulahlekelwa kwesisindo esibi ngenxa yokutheleleka noma ukuhlinzwa.
Ngokumangazayo, inzuzo esindayo evela ekusetshenzisweni kwe-Anavar isisindo semisipha esindayo ngoba i-hormone ehlinzekwa umuthi ayivuki. Kanjalo, umzimba wakho ngeke ube nokugcinwa kwamanzi ngokweqile ngenxa yokusebenzisa i-steroid. Okunye okumangazayo ngemiphumela yalesi sidakamizwa ukuthi kulula kumsebenzisi ukubambelela ekuzuzeni kwesisindo okuvelayo.
Yize umuthi ungeke unikeze izinzuzo eziningi njengalezo ezivela ekusetshenzisweni kwamanye ama-mass agents afana ne-Testosterone ne-Anadrol, kuzoba kufanelekile kubantu abafuna izinzuzo ezilinganiselwe. Kungakho ifunwa kakhulu ngabesifazane ngoba iningi labo lifisa nje ukukhuphuka kwemisipha emincane.
Ukuthi ufuna i-Anavar yamadoda noma I-Anavar yabesifazane yezikhathi zokuthola isisindo ngesikhathi esingesiso isizini, ngokuqinisekile uzothanda izimfanelo zokuqinisa umzimba ze-Oxandrolone. Uzoqaphela ukuthi kukwenza ukuthi uthole inani elincane lamafutha omzimba angekho ngenkathi yokuqhathanisa lapho usebenzisa amanye ama-steroid anamandla.
I-Anavar yabesilisa noma i-Anavar yabesifazane ingaba isengezo esiwusizo kakhulu kuwe ngesikhathi sokusika. Umuthi ngokwemvelo une-anabolic enamandla kakhulu. Njengoba kunje, kusebenza kakhulu ekulondolozeni izicubu zomzimba lapho umuntu edla.
Lapho ufuna ukuchitha amafutha omzimba, umthamo wakho wekhalori kufanele ube ngaphansi kunenani lama-kilojoule owashisayo ukulungiswa kwezicubu zomzimba eziphezulu. Noma kunjalo, kungakhathaleki ukuthi yikuphi okuphelele ekudleni kwakho, uzolahlekelwa izicubu ezithile zomzimba uma umzimba wakho ungenawo i-ejenti enamandla ye-anabolic. Ukucabanga ngezakhiwo zayo eziqinile ze-anabolic, kulapho u-Anavar eza usizo khona.
Uma usebenzisa u-Anavar ngesikhathi sokusika, umzimba wakho uzokwazi ukushisa amanoni kahle. Ngokuhamba kwesikhathi, uzobona i-vascularity ethuthukisiwe futhi uzobukeka uqine futhi uchazwe ngokwengeziwe. Yingakho amadoda amaningi ekhetha I-Anavar yokunciphisa umzimba.
I-Anavar iyindlela ekhethelo ye-steroid yabasubathi ngenxa yokuphawuleka kwamandla ayo. Kodwa-ke, umphumela wayo kulokhu awubizwa njengowamanye ama-steroid anjengeHalotestin noma i-Dianabol.
Amandla omsubathi athonya ijubane namandla akhe, womabili lawo anethonya eliqondile ekusebenzeni kwakhe njalo komdlali. Lapho umbaleki eba namandla ngokwengeziwe, kuba ngcono ukusebenza kwawo.
Ngaphandle kwamandla, abasubathi kufanele kube lula kakhulu ngakho-ke, abafuni ukwakhiwa okukhulu kwemisipha. Ngoba ukuqinisa kwayo umuntu ngaphandle kokukhulisa ngokwakha izicubu zabo zomzimba, u-Anavar uba umgqugquzeli ofanelekile wezemidlalo. Okungcono futhi, akuholeli ekugcinweni kwamanzi, okungahle kube yisithiyo sokusebenza komsubathi.
Noma ngabe usebenzisa u-Anavar ukukhipha amanye amafutha noma ukuthuthukisa ukusebenza kwakho kwezemidlalo, uzokwazi ukuthi uma usuthatha umuthi njengoba ubekiwe, izinga lakho lokululama lithuthuka kakhulu. Ngaphandle kwalokho, kuthuthukisa ukukhuthazela kwakho kwemisipha.
Ngenxa yalokhu, uzothatha isikhathi eside ngaphambi kokuthi ukhathale lapho wenza imisebenzi engokomzimba, ngaleyo ndlela amandla okucindezela ngokuqinile nokwandiswa okude. Lokhu kukusiza ukuthi uzuze okuningi emihlanganweni yakho yokuzivocavoca umzimba.
Imiphumela emibi ye-Oxandrolone
Nayi imiphumela emibi ejwayelekile yeningi lama-steroid athandwayo. Ake sibheke ukuthi imiphumela emibi ye-oxandrolone inokuhlangana yini nakho.
Ngokungafani namanye ama-steroid afana I-Trenbolone i-aromatize, ngaleyo ndlela ibangele i-gynecomastia, i-hormone ehlinzekwa yi-Oxandrolone ayibangeli noma yiluphi uhlobo lwe-estrogenic side effect. Lokhu kungenxa yokuthi akubangeli ukugcinwa kwamanzi okuzokwenza ukuthi amazinga e-estrogen akhuphuke. Impahla engagcinwa amanzi yenza umsebenzisi abe sengozini yokuthola umfutho wegazi ophakeme.
Ukungathandeki kwe-Oxandrolone ukudala imiphumela emibi ye-estrogenic nayo kufakwa eqinisweni lokuthi ayithwali noma yimuphi umsebenzi ohambisana ne-progestin.
Yize i-Oxandrolone ingeyona i-androgenic kakhulu, iletha umsebenzi omncane we-androgenic. Ngenxa yalokho, abantu abayisebenzisayo kungenzeka bahlakulele induna futhi labo abathambekele kakhulu ekuphepheni kwamaduna wesilisa kungenzeka bathola ukulahleka kwezinwele okuningi kulandela ukusetshenziswa kwe-steroid.
I-Anavar yabesifazane ingakhiqiza imiphumela ye-androgenic engakhuthaza izimpawu ze-virilization njengokukhula kwezinwele zomzimba, ukuqina kwamazwi okujula kanye ne-clitoris eyandisiwe kwabesifazane. Kodwa-ke, izimpawu zingavinjelwa ngokuthatha okulungile I-Anavar isilinganiso.
Uma ungowesifazane futhi uhlangabezana nezimpawu zokugciwane, welulekwa ukuba uyeke ukusebenzisa umuthi ngokushesha. Ngemuva kokwenza lokho, izimpawu kufanele zinyamalale. Ngaphandle kwalokho, izimpawu zingaba yingxenye yakho uma ungazinaki futhi uqhubeke ne-steroid.
Noma kunjalo, iningi labasebenzisi be-steroid abayizwa imiphumela emibi ye-androgenic ngoba imvelo ye-androgenic iphansi impela.
Ngokungafani namanye ama-anabolic steroid adinga ukusetshenziswa kanye nama-inhibitors we-5-alpha reductase okwenzelwe ukuvikela imiphumela emibi engenzeka nge-androgenic, u-Anavar uphephile futhi mnene ngisho ngaphandle kwama-inhibitors. Lokhu kungenxa yokuthi i-enzyme ye-5-alpha reductase ihloselwe ukwehlisa i-testosterone ku-dihydrotestosterone, kepha njengoba i-Oxandrolone isivele i-dihydrotestosterone, ayidingi i-enzyme.
Eminye yemiphumela emibi kakhulu ye-oxandrolone yinto ethinta i-cholesterol. I-hormone ye-Oxandrolone icindezela i-cholesterol ye-HDL ifike ku-50% ngenkathi ikhuphula amazinga we-cholesterol ye-LDL afinyelela ku-30%.
Ngenxa yalokhu kuguqulwa kwe-cholesterol, abantu abanezinkinga ze-cholesterol bayalwa ukuba bagweme ukungezelelwa besebenzisa i-oxandrolone. Ngaphandle kwalokho, labo abaphilile ngokwanele ukusetshenziswa kwayo bayakhuthazeka ukuba balondoloze impilo enempilo ngokudla ukudla okunobungane ne-cholesterol enamazinga amaningi e-asidi kanye nokwenza imisebenzi eminingi yenhliziyo.
Lapho usebenzisa lesi sidakamizwa, kungakuhle futhi ukuthi unciphise amafutha agcwele kanye noshukela olulula. Ungafaka isengezo se-cholesterol antioxidant ukugcina amazinga abo ehlolwa.
Noma iyiphi i-steroid oyithathayo, kufaka phakathi Anavar, icindezela ukukhiqizwa kwemvelo kwe-testosterone emzimbeni wakho. Noma kunjalo, isilinganiso sokucindezela siyahluka kusuka ku-steroid kwesinye. Uma kuqhathaniswa namanye ama-steroid athengiswayo njengamanje, u-Anavar unenye yemiphumela emincane kakhulu yokucindezela. Icindezela amazinga e-serum aphelele cishe isigamu.
Noma kunjalo, noma umphumela wokuncindezelwa kokukhiqizwa kwe-testosterone yemvelo ye-Anvar incane, amadoda alulekwa ukuba enze i-testosterone engaphandle ibe yingxenye yezakhi zawo zokuncengela. Ngaphandle kwalokho, i-hormone ye-oxandrolone ingadala isimo esihlobene ne-testosterone, phakathi kwezinye izinkomba ezinzima.
Kodwa-ke, amanye amadoda awazitholi izingqinamba ezihlobene ne-testosterone njengomphumela wokusebenzisa i-Anavar ngisho noma amazinga awo wokukhiqiza we-testosterone ancishiswa yi-50% yi-steroid. Lokhu kuya nge-testosterone yendalo yendoda noma. Noma kunjalo, iningi lamadoda lizodinga i-exosterone yemvelo ye-testosterone ukunciphisa izimpawu ezinokwenzeka ngenxa yokusebenzisa i-steroid.
Ngenhlanhla, njenganoma iyiphi enye i-anabolic steroid, imiphumela emibi ye-testosterone ye-Anavar izoqala ukuqothuka uma umuntu eyeka ukuyithatha. Kepha ukululama okugcwele kuzothatha isikhathi ukwenzeka futhi lelo hlelo lokwelashwa ngomjikelezo (i-PCT) luyanconywa phezu kwenkambo yokwelashwa ye-steroid isiqediwe. I-PCT isheshisa inqubo yokutakula.
I-Anavar yi-C17-aa I-steroid ye-Anabolic futhi ngakho-ke, kungaholela ekulimaleni kwesibindi, noma kungenjalo ngokuqondile. Ukusetshenziswa okuqhubekayo kwe-steroid kungaholela ekwandeni okukhulu kwamanani we-enzyme yesibindi. I-enzyme yesibindi eyandayo icindezela isibindi, yandise ukulimala kwengozi yayo.
Ngakho-ke, ngenxa yempilo yesibindi sakho, kubalulekile ukugwema ukusebenzisa noma iyiphi i-C17-aa anabolic steroid, kufaka ne-Anavar uma unenkinga yesibindi. Futhi, ungathathi utshwala ngokweqile uma ufaka i-C17-aa anabolic steroid efana ne-Anavar ukugwema ukweqisa isibindi sakho.
I-detoxifier yesibindi ezinhlelweni zakho zokunezela ngenkathi usebenzisa i-Oxandrolone izohamba ibanga elide ukuze ulondoloze impilo yakho yesibindi. Futhi njengoba ukusetshenziswa okunwebekile kwe-steroid kungadala ukulimala kwesibindi, kubalulekile ukuthi unqume isikhathi sokunikezwa kwe-Anavar sifinyelela kumaviki e-8.
Yize i-Oxandrolone ilungele abesilisa, umjikelezo we-Anavar ubumnene kakhulu kwabesilisa kangangokuba iningi labasebenzisi besilisa bakuthola kungaphumeleli ezidingweni zabo ezikhulayo, ikakhulukazi ngesikhathi sokukhula kwesikhathi noma isikhathi sokukhula. Kodwa-ke, basaqhubeka nokubambelela kuyo ukuze igcinwe izicubu zayo zemisipha, okungenye yezinhloso eziphambili zeningi labasebenzisi. Okungcono futhi, umuthi uthuthukisa umsebenzi womuntu we-metabolic.
Umjikelezo we-Anavar wabesifazane
Ngenkathi i-hormone ye-Oxandrolone ingeyona eyokukhulisa isisindo, akuyona into ejwayelekile ukuthi umsebenzisi wesifazane athole i-100% inzuzo ethambile yokuyisebenzisa lapho uyisebenzisa. Njengoba kunjalo, nangeqiniso lokuthi iyi-steroid evunyelwe kahle kakhulu futhi kungukukhethwa kwabasubathi besifazane abanemidlalo ephezulu esebenza kahle.
Abasebenzisi be-Oxandrolone besifazane abadla izigaba zokudla kanye nezigaba zokukhula bazuza kakhulu kulo muthi ngoba weseka uhlu lwezakhi zomzimba okubalwa kuzo ukwakha umzimba, isibalo nomzimba onamafutha we-bikini.
Umjikelezo ojwayelekile we-Anavar kwabesifazane ubizwa kakhulu kwi-10mg kuya ku-20mg yesidakamizwa ngosuku futhi uvame ukuqhuma amasonto ayisithupha. Yize eminye imijikelezo idlula i-20mg, okweqile akudingekile futhi kungahle kube nemiphumela emibi ye-oxandrolone.
Uma kwenzeka ungowesifazane futhi ufuna ukusebenzisa i-steroid isikhathi esingaphezu kweviki lesithupha, kungakuhle ukuthi uqale futhi wenze nge-3 kuya esikhathini seviki le-4 ngaphambi kokuqala isifundo se-6-sonto.
Iningi labasebenzisi besilisa basebenzisa I-Anavar yokunciphisa isisindo ikakhulukazi lapho bebhekene nenqubo yokusika / yokudla. Bathola i-50mg yesidakamizwa ngosuku njengethamo elifanele lokuqalisa le-Anavar. Kodwa-ke, njengowesilisa, ungasebenzisa ukuya ku-80mg ngosuku njengoba kungakulowo mkhawulo, umuthi uphephile emzimbeni wakho.
Ukucabangela Intengo ye-Oxandrolone okungenani yi- $ 2 ngethebhu ye-10mg, umjikelezo we-Anavar wamadoda ungabiza kakhulu.
Umthamo ofanele we-Anavar uhlukahluka ubumba umuntu nomuntu; kuya ngokobuntu bakhe kanye nezinhloso zakhe zokuzimela.
Ngokuvamile, owesifazane uzodinga umthamo ophansi we-Oxandrolone kunowesilisa ukuze athole imiphumela / izinzuzo ezifanayo. Imvamisa, umjikelezo wokusika we-Anavar kowesifazane usezingeni le-10mg nsuku zonke. Kodwa-ke, umthamo wansuku zonke ungakhuphuka njenge-20mg futhi yize ungadala imiphumela oyifunayo, umthamo omkhulu kangaka we-steroid ungenza owesifazana ukuba athuthukise izimpawu zegciwane.
Umsubathi wesilisa onesifiso sokuthola umthamo wokuqala we-Anavar we-80mg ngosuku uzoba ofanele kakhulu. Noma kunjalo, umthamo omncane ungamukelwa kepha akufanele ube ngaphansi kwe-30mg, ngaphandle kwalokho ngeke usebenze ngokugculisayo.
Ngokuya ngocwaningo nokuhlukahlukene Anavar Reddit izibuyekezo, umthamo ojwayelekile we I-Anavar yamadoda yi-50mg ngosuku.
Ungamtshala kanjani u-Oxandrolone
Amandla: ngegramu ye-1 ye-Oxandrolone
Ukuhlushwa okuphezulu kakhulu okukhiqizwe: 20 mg / ml
I-1 gramu ye-Oxandrolone powder
I-1 beaker efanelekile ukwamukela inani lamanzi uketshezi
I-2 ml ye-190 Proof Grain Alcohol
Ungayithenga kuphi i-Oxandrolone
Ukuphela kwendawo lapho ungathenga khona i-ngokusemthethweni ne-Anavar esezingeni eliphakeme isuka kumthengisi onamalayisense futhi olawulwa ngokusemthethweni. Kulelo noti, i-AASraw yindawo enhle yokuthola umkhiqizo.
I-AASraw ibhekana nokuqanjwa okukhulu nokwenziwa kwe-Oxandrolone ngakho-ke singakunikeza nganoma yisiphi isamba se U-Anavar ukudayiswa noma ukuqeda ukusetshenziswa inqobo nje uma ugcwalisa izidingo ezidingekayo. Sisebenza ngaphansi kwe-CGMP futhi uhlelo lwethu lokulawulwa kwekhwalithi elandekayo lusisiza ukuba sisebenze ngaphakathi kwemithetho nemigomo efanelekile yokuqinisekisa ukuthi sinikezela ngemikhiqizo ephezulu kakhulu.
Ukuchazwa kwe-Meta: I-Oxandrolone (Anavar) iyisidakamizwa elenziwa i-androgen ne-anabolic steroid (AAS) esidume kakhulu ngamandla alo namandla okwandisa amandla. Iphakathi kwama-anabolic steroid aziwa kakhulu futhi asetshenziswa ngomlomo. I-Oxandrolone iphephile ukuthi isetshenziswe yibo bobabili abesilisa nabesifazane uma kuthathwa umthamo ofanele.
Ukuhlukumeza i-RH, i-DeSanti L: I-Oxandrolone yafaka inzuzo ethe xaxa yokuthola amandla ngesikhathi sokululama ekushisweni kanzima igcinwa ngemuva kokuyekiswa kwe-anabolic steroid. Burns. I-2003 Dec; 29 (8): 793-7. [PMID: 14636753]
UJohn Cabaj, "Inqubo yokwenziwa kwe-oxandrolone." I-US Patent US20030032817, ikhishwe ngoFebhuwari 13, 2003
Karim, A., Ranney, RE, Zagarella, J., & Maibach, HI (1973). Isimo se-Oxandrolone kanye nemetabolism kumuntu. I-Clinical Pharmacology & Therapeutics, 14 (5), 862-869.
Raiti, S., Trias, E., Levitsky, L., & Grossman, MS (1973). I-Oxandrolone kanye ne-hormone yokukhula komuntu: ukuqhathanisa imiphumela ekhulisa ukukhula ezinganeni ezifushane. Ijenali yaseMelika yezifo zabantwana, i-126 (5), 597-600.
Rosenbloom, AL, & Frias, JL (1973). I-Oxandrolone yokwenyusa ukukhula ku-Turner syndrome. Ijenali yaseMelika yezifo zabantwana, i-125 (3), 385-387.
I-Strauss, i-RH, iLiggett, iMT, neLanese, i-RR (1985). Ukusetshenziswa kwe-Anabolic steroid nemiphumela ebonakalayo kubagadli besifazane abaqeqeshiwe abayishumi. IJama, 253 (19), 2871-2873.
Umhlahlandlela Ophelele Wokuthenga I-2019 Yokwakhiwa kweSARM SR9009	Ngabe uFlibanserin Usiza Kanjani Owesifazane Njenge-Hormone Yobulili